Bahrain : nandihindihy ho’aho i George W · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Janoary 2008 11:19 GMT
Niserana tao Bahrain i George Bush nanditra ny fitetezam-paritra nataony tao azia andrefana, io no fitsidihana voalohany nataona filoha US tao amin’ny firenena.
Misy azo antenaina hoy Mahmood:
He’ll probably fly in on a helicopter from some big tub floating in the Gulf, that the Iranians have taken an inexplicable fancy to all of a sudden, land in the naval base in Juffair, shake some hands, visit with some illustrious personages whom he will make sure they understand that Eye-Ran is pretty bad for their survival and that of the wouurld, tell them to expand the bases and use their facilities and airspace to tame the Eye-Ranians, just a bit, like, a couple of 10,000lbs bombs strategically targeted at military and dangerous areas.
Handalo ny tanàna i Bush.
Mety handeha angidimby avy any amin’ny sambo mpiady mivezivezy ao amin’ny helodrano any izy, fa mampatahotra tampoka ny rehetra manko ny Iraniana, mampanahy ny amin’ny tobim-pamaharana ao juffair, hanontsana tanana vitsivitsy, hitsidika ireo Olobe izay miararesy lahatra aminy fa loza mitatao ho azy ireo syho an’izao tontolo izao i Iran (Eye-Ran), hiteny azy ireo mba hahitatra ny tobim-pamaharana ary hifanaraka amin’ny fampiasany ny faritr’habakabaka hamolahana ny Iraniana (Eye-Ranians), handatsaka baomba roa milanja 10 000lbs hikendrena toby miaramila sy toerana mampididoza fotsiny.
Zavatra tsotra. Tsy hisy ho voakitika ny avy aty amintsika.
Sahala amin’i Irak (Eye-Rack)
Sady ivelany (isika) no anatiny. Ary efa voalahatra sy voabaikon’ny Goay Be izany.
Ary dia ho tontosa ilay famiananiany handravana ny tsinam-paribolana (endriky ny faritra maitso sy be mponina ao Azia andrefana ny tsinam-paribolana na croissant) miainga avy any Palestina ka hatrany Afghanistana (tanin’ny Afghan). Ary dia ho antsoina hoe Bushistan (tanin’i Bush) izany faritra midadasika izany.
Tanaty fitohanan’ny fiara
Maro ny mpamaham-bolongana no tratran’ity tranga ity; hoy Scarlett Cyn, Amerikana iray mipetraka any Bahrain hoe:
Manambahiny manakaja eto Bahrain omaly sy androany. Dia ny filoha Georges W. Bush – “Dobia”. Ny marina dia teo ihany koa i Condi… tsy dia faly tamin’i Dobia aho androany. Satria nataony tara fidirana tany ampiasana 40 minitra aho androany maraina. Ny 30 minitra fandehanako mahazatra manko dia nandaniako ora iray sy sasany androany. Tsy mba noeritreretiko mihitsy – hatramin’izay nonenako teto Bahrain – izany hoe nampisy fiantraikany tamin’ny fiainako manokana izany filohan’ny Etazonia, filohan’ny fireneko izany. Fa dia vitany tokoa izany.
Matoky aho fa tsy ninia hanao izany izy. Saingy, notapahin’(ny polisy) avokoa ny lalana rehetra, ny fiara amin’ny lalandehibe rehetra mampifanohy ny firenena manana habe mitovy amin’i Washington DC no nijanona… amin’ny ora fivoahan’ny rehetra(fidiran’ny mpianatra sy ny mpiasa)
Redbelt indray dia sorena; nanome vahaolana (azonao ampiharina fa dia ianao ihany no tompon’andraikitra raha misy zava-mitranga tsy ampoizina) izy:
Ity no maraina izany andro nahasorena indrindra nandritra ny fotoana ela. Manomboka amin’ny 8 ny ora iasako, ary miala ny trano aho amin’ny 7 ora sy sasany ary tonga any ampiasana ara-potoana na tratra aoriana 5 minitra, raha be indrindra.
Androany kosa dia tamin’ny 9 sy 13 mn no nahatongavako. … Antony voalohany dia somary nanorana androany, ary ny Bahrainita moa somary mikivilivily (skate) amin’ny lalana rehefa mando fa tsy manamory loatra. Noho izany dia somary nitandrina tsara avokoa ny rehetra.
Ny antony faharoa, ary ny tena antony? George W. Bush. … Tampina daholo ny lalana rehetra, noho ny fitandroana sy fiarovana ny antony sady mety ho fanadiovana ny lalana ihany koa. … Nolanian’i George W fotsiny ny andronay.
Mahagaga, tonga eto fotsiny izy dia betsaka ny zavatra voakitiny! Tahaka ny hoe misy hery (misintona sa dindo mahery sa satro-boninahitra) izany manodidina azy! Fa na izany aza, misy zavatra tiako toroana rehefa sendra toy izao: ny Nintendo DS. Mitadiava kilalao izay tsy voafetran’ny fotoana ny fanaovana azy (Phoenix Wright na Pokemon izao mety amin’izany, indrindra fa ireo no karazan-dalao fototra) ary dia lasa izao. Fomba fanalan’andro haingana ihany no mahamety ity fika ity mandra-pahalany ny fe-potoana iasan’i Dubya.
Mandihy fa mitovy tadin-dokanga
Naseho (sary) niaraka tamin'ny sabatra anilan'ny mpanjakan'i Bahrain, Shaikh Hamad bin Isa Al Khalifa ny filoha Bush ary niaraka nanao ny dihin-drazana kely ry zareo. Niontana i Ammar :
Tena niserana vetivety loatra ilay izy ka tsy tsikaritsika loatra. Tsy ho nahita isika afa-tsy ilay fifamoivoizana nandrangitra androany maraina ! Notapatapahana avokoa rehefa lalana mba hiarovana ‘ny kirihitra’ ( the bush), ary dia tonga ora iray na mihoatra tany ampiasana avokoa isika rehetra. Saingy eh ! mba misy lafiny mahatsara azyihany koa ny fitsidihana an! Mba mijery an’i Bush milalao sabatra (anaty dihin-drazana) miaraka amin’ny tsikin’ankizy mahafinaritra ahy. Marina raha tsy toy ny nanome korontsana voalohany indrindra ny ho an’ny zaza.
Nahafaly an’i Mahmood koa ny toejavatra:
Nampientanentana tokoa ny nahita nyfiloha nandihy ny ‘Ardha’ niaraka tamin’ny mpanjakantsika androany folakandro ! Nanatsoaka ny sabatra ilay zalahy tahaka ny hoe teraka ho amin’iny izy. Nahita olona mitovitovy koontsaina aminy ihany lahy i Bush.
Ny sary maventy
te-hampitadidy zavatra hafa amintsika i SoulSearch :
Nandritra ny fitsidihana tamin’ny fomba ofisialy teto Bahrain, dia nanome voninahitra antsika tamin’ny fahatongavany izy ary niangavy antsika « hanolotra ny tanam-pihavanana » ho an’Isiraely. Ooooaahh, ny Isiraeliana mampahonena, izay tsy mila loatra ny fanampiantsika. Matahotra loatra ny Andriamanitra mampangovitra sy masiakan’ny Palestianiana masiaka izay mikohak’afo anaty ny fivorian-dryzareo sy mandrava ny firavoravoany. Aza tsiny Atoa filoha. Diso fandray mihitsy ianao izany… tena angadinao mihitsy ny managan’ady etsy sy eroa… Aleo ampahatsiaroviko anao fa 60taona izay ny Palestiniana no niely teny rehetra teny. Tsy manana firenena ry zareo eto amin’ny bolantany ary miaina anaty tranolay amin’ny tany voabodo raha manohy ny fanitarana ny fitoeran’ny voanjo amin’ny tany nangalarina kosa ny Isiraeliana…
Mitana ny sabatra koa ianao.
Ary i Hayat kosa dia liana kokoa amin’ny lohahevitra anatiny:
Mampieritreritra ahy hoe niantraika lalina tamin’ny tetibolam-panjakana ve iny fitsidihan’ny filoha Bush iny, miaraka amin’ireo delegasiona maro entiny? Taiza no nahitana ny vola nanaganana ny Lapan’ny Sakhir Palace sy ny kojakoja miaraka aminy, ny fikarakarana ny fialamboly ary ny firobarobana tanaty fiainan’ny Mpanjaka sy ny fiankaviany nampifalifaliana nandritra ny alina sy ny atoandro – nefa misy ny olom-pirenena tsy manabola hividianana mofo dipaina iray mitentina 100 fils akory.
Desert Bloom indray mihevitra fa zava-dehibe ny fitsidihana:
Maro ny Arabo no miteny ny mpitondrantsika (ny firenena izay tsidihan’i Bush) ho tsy tena lehilahy, tsy sahy, na tsy ampy hery. Tsy tokony hihaona aminy ny mpitondra Arabo, dia hiara-hiady aminy sy ny amin’izaotontolo izao izay manohana azy. Ho an’ireo izay mieritreritra tahaka izany dia hoy aho hoe : matotra ve ianao ? Inona no nampianarin’ny islam anao ? ny mpaminanintsika 3alaih il 9alat wilsalam dia olona milamina (tia fandriampahalemana) indrindra manerantany ! Koa nahoana no eny amin’ny mifanohitra izany indray no misy ny Miozolmana ? … Raha misy ny vintana hiresahana ny ankilany Maninona Raha Mba Ampiasaina Izany ?